यस्ता अवस्थाका व्यक्तिले भुलेर पनि नखानुहोस् माछा ! – Bisal Chautari
- २८ माघ २०७४, आईतवार ०९:०७ मा प्रकाशित
Do not forget to forget the fish of such situation.
काठमाडौँ, २०७४ माघ २८ आइतबार । माछामा प्रशस्तै पाइने प्रोटिन र भिटामिन-डी ले हाम्रो मांशपेसीको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्दछ। तथापी, यहि प्रोटिन अधिक हुँदा शरिरको लागि हानिकारक हुन सक्छ।